Awu, mhlawumbe ubuchopho bomuntu ngosizo umcabango ilungele ukukhiqiza ezihlukahlukene imibono. Ngezinye izikhathi uye uzibuze futhi ukubuza umbuzo ethi: "? Kungenzeka kanjani lokho umuntu ucabanga ngalokho ayemphefumulele"
Ngisho emkhakheni wezemidlalo abantu beveza eningi imincintiswano ngokubikezela izinto ezididayo nezingathembekile usithe. Iningi labo, ngakho-ke khetha nzima lo mdlalo engenangqondo kakhulu.
Uhlu labo izinhlobo umzimba, okuyinto akunakubangelwa okuhlekisayo, kuletha ukumamatheka enkulu ngokwanele. Ake sixoxe ngezinye zazo, okuyizinto athandwa kakhulu futhi funny.
Ngeke ukholwe, kodwa lezi izinhlanga athandwa kakhulu. Kepha akusikho lokho kuphela eRussia kodwa futhi phesheya. E-United States ngisho babe inhlangano ekhethekile waziphatha ukuqaliswa yabo, - I-National Association of ugandaganda izinhlanga, eyasungulwa ngo-kude 1969.
Abalandeli bathi iqala nge ngekhulu XIX, lapho abalimi ligcwaliswe amahhashi. Zazibophela ukuba ezinye izinsimbi ephakamisa nokubuka kungakhathaliseki ukuthi smoeut udonse womkayo kanye. Owinile kwakumi lowo ihhashi wakwazi ukudonsa umthwalo olusindayo ngaye. Khona-ke, lapho kwaqala ukuvela tractor, abalimi Yaqala ukulinganisa amandla abo.
Khona-ke, lapho imishini yensimbi baqala ukuba ngcono, izimbangi Yaqala ukulinganisa amandla abo hhayi kuphela, kodwa futhi ijubane. Kusukela ngaleso sikhathi, kwathatha isikhathi eside, futhi namuhla kukhona 22 ezisemthethweni izinhlangano ugandaganda izinhlanga emhlabeni.
Kusukela ngo-2002, e-Rostov esifundeni labetibambile ugandaganda uhlanga ngaphansi kohlelo olubizwa ngokuthi yi umncintiswano "Bison Track Bonisa". Kusukela ngaleso sikhathi, lezi imincintiswano umzuzile izihlwele zabalandeli futhi ababambiqhaza, futhi zalotshwa uhlu olusemthethweni ezikhangayo leli Rostov esifundeni. izinhlanga Okufanayo aphethwe eCrimea ngo-2007, eduze kwedolobha Simferopol.
Ngaphezu kwalokho, kubahlanganyeli uhlanga ngcono tractor zabo akuzona sibi kakhulu kunalokho okuboniswa womjaho wasemgwaqeni abashayeli nezimoto ezithwala. Abashayeli lezi izilo ziyashintsha ukuba injini qinile ukwandisa ukumiswa kwabo, bagqoka abaphehla ugesi zabo. Ogandaganda ukuthola amandla kangangokuthi mncintiswano kungenzeka amasu okugumbuqela imibuso yensimbi izilo. Kubukeka umbukwane emangalisayo.
ukuzijabulisa okunjalo kungaba ngokungenamibandela ukukhangisa njengoba umdlalo engenangqondo kakhulu. Racing kogandaganda enamandla Ziningi nabalandeli emhlabeni jikelele.
Kuphi lokhu umdlalo wazalelwa, asikwazi ukusho ngokuthe ngqó.
Kukholakala ukuthi pirates okubi futhi womele igazi ngubani bephanga imikhumbi futhi abulale abantu, ungase beveza yilolu hlobo lokuzilibazisa njengoba isaka izinhlanga. Yiqiniso, kusukela ngaleso sikhathi wahlala Imininingwane sasivumela okuncane mayelana nokuthi bayabukana sengathi bafuna ukuhleka bemikhumbi futhi indlela bakhuphuka nge ngakho ukuchitha isikhathi sabo mahhala.
Akwaziwa yokuthi induna kancane kancane waqala ukuvimbela obuningi nokugembula. ezimbili Lezi ukuzijabulisa kwaholela izimpi njalo ezinkantolo, kanye nokugqugquzela ubutha ngaphakathi pirate nezisebenzi. Futhi, cishe, kusukela okuthuleyo pirates necebo isaka lakhe izinhlanga esikhundleni ukugembula.
Enye inguqulo ethandwayo, ke yasungulwa eRussia lasendulo: kulendawo kumnandi kangaka, eneka abalimi zabo.
Kuze kube manje, lo mdlalo ingenye ethandwa kakhulu, futhi wenziwa cishe zonke izenzakalo zezinkampani. Futhi, lokho kuzijabulisa ziphoqa, futhi emaphathini zezingane.
Ukuzama ukukhomba ezemidlalo iwubuphukuphuku kunazo, ingasaphathwa ukuncintisana okunjalo. Uma ufuna ukuzizwa like igundane, okuyinto nokujaha ushizi, Ugra enjalo nje ngawe. Minyaka yonke, lo mcimbi aphethwe emagqumeni Cotswold. Kulona kanye igquma ukukhuphuka abahlanganyeli. Abahleli balo emthambekeni avunyelwe inhloko yabangamashumi double Gloucester ushizi. Abashadikazi abazowina, kuzolalelwa khona okunguye owaqala ubambeke kweqa phezu ushizi entabeni.
Chessboxing - lena umdlalo kumnandi kakhulu. Abasubathi uphike yokuthi akunakwenzeka ukuba kokubili oluqinile futhi smart. Ngokusho imithetho yomdlalo, abahlanganyeli bancintisane for imizuliswano 11. Phakathi imizuliswano kushintshana umdlalo we-chess isibhakela. Wina ke, ungakwazi noma nishaye ongqongqozayo out abaphikisi noma checkmate emdlalweni chess.
Sibambe Ferret e ibhulukwe lakhe
Lo mdlalo eseke wangena isihloko ngenxa strangeness yayo nengozi. I Braves, isibindi ukuvumela Ferret e ibhulukwe lakhe. Umsebenti wabo oyinhloko - ukubamba isilwane eside ngangokunokwenzeka.
Lokhu kuyingozi umdlalo, ngoba akekho owaziyo indlela ferret ngeke baziphathe. Isilwane kungaba ngendlela ongayilindele kuholele ngokwayo, okusenza elikhuhluziwe imincintiswano idatha.
It uhlala kuphela ukwengeza ukuthi namuhla kuwumphumela waqopha nokugcinwa Ferret imizuzu emihlanu.
Uphonsa isihlahla sikaKhisimusi
Kubalandeli aphonse gravity wumdlalo ezifana ngokuphonsa Christmas izihlahla. Kwezinye izindawo eJalimane lolu ukuzijabulisa umcimbi bendabuko esiqhutshwa njalo ngonyaka. Hard ukukholelwa, kodwa izwe irekhodi eyayibekwe ngo-2007 nge ngesihlahla sonwele okuyinto ubekwa 17.5 amamitha.
Ukuthandwa kulo mncintiswano likhulu kakhulu. Sasicabanga lokhu Finns umdlalo. Imincintiswano lokuqala olusemthethweni yayiqhutshelwa 2000. lezi zenzakalo ubuhanjelwe inombolo enkulu kakhulu iqhaza futhi izibukeli. Futhi ngokuvamile ababemenyelwe ukwahlulela Guinness World Records, ngakho bhalisa amarekhodi entsha ku Ufaka, uma ikhona.
ezemidlalo Funniest ukukhetha kunzima kakhulu. Kukhona okuningi mncintiswano onamileyo kwenani elincane siwela sihloko. Futhi nsuku zonke zikhona ezemidlalo entsha ezihlekisayo. Zibhaleni phansi enkulu ngokwanele ukuchaza kubo kwelinye sihloko. Kodwa zonke ukuletha injabulo enkulu ababambiqhaza, ngisho noma ngeke kukhonjwe kuya kwemidlalo sina.
Izivivinyo eliphumelela kakhulu ngilulekela imilenze
Ingalo wrestling - izimfihlo, imithetho, umsebenzi
Athletics: Doping scandal ezihilela abasubathi Russian
Ukuphefumula Proper ngenkathi isebenza
Rugby ngumlando, imithetho, yesimanjemanje
Irekhodi emhlabeni ngoba ukhipha. Iziphakamiso, izimo, imishini
Indatshana enesihloko esithi 'eziwuthando bemvelo "
Le nhlangano yenkolo yokulwela ku circumferential kaningi kwenzeka ezinyakazayo curvilinear
Umuthi 'Kanefron ": nozakwabo nokubonakaliswa ukusetshenziswa
Indlela igama ingane? igama Stanislav Inani
Lamabutho we esibelethweni
Studio Abaqaphi - kukhethwa ochwepheshe
On zokunciphisa: amalungelo isisebenzi